Izakhiwo Ezixubile Zokwakha
Sonto 1 Meyi 2022
Izakhiwo Ezixubile Zokwakha Itholakala kwidolobha lomlando laseXi'an, phakathi kwesikhungo samabhizinisi nomfula weTaoHuaTan, iphrojekthi ayihloseli ukuxhumanisa okwedlule nokwamanje kuphela kepha futhi nokwamadolobha nemvelo. Iphefumlelwe yi-Peach blossom spring Chinese tale, iphrojekthi inikeza indawo yokuhlala epharadesi futhi esebenza ngokuhlinzeka ngokusondelana nemvelo. Ngokwesiko laseChinese, ifilosofi yamanzi asezintabeni (uShan Shui) inencazelo ebalulekile yobudlelwano phakathi komuntu nemvelo, ngaleyo ndlela ngokunikeza ithuba lokuma komhlaba okunamanzi wale ndawo, iphrojekthi inikeza izikhala ezibonisa ifilosofi yamaShan Shui edolobheni.
Mgqibelo 30 Apreli 2022
Ubunikazi Bebhizinisi "I-Cinema, ahoy" kwakuyisiqubulo sohlelo lwesibili lwe-European Filamu eCuba. Kuyingxenye yomqondo wokuqalwa okugxilwe ekuhambeni njengendlela yokuxhuma amasiko. Lo mklamo uphakamisa uhambo lomkhumbi wokuhamba usuka eYurophu uya eHavana ulayishwe amafilimu. Ukwakhiwa kwezimemo namathikithi omkhosi kuphefumulelwe ngamaphasiphothi kanye nokudlula kwabagibeli okusetshenziswa abahambi emhlabeni wonke namuhla. Umqondo wokuhamba emafilimini ukhuthaza umphakathi ukuba wamukele futhi ube nelukuluku lokushintshana ngamasiko.
Lwesihlanu 29 Apreli 2022
Lwesine 28 Apreli 2022
Ukudla Okungenamsoco Ibhokisi lesipho elithi "Zijabulise Duck" liyibhokisi lesipho elikhethekile lentsha. Ugqozi lwamathoyizi wesitayela se-pixel, imidlalo nama-movie, lo mklamo ubonakalisa "idolobha lokudla" lentsha enemifanekiso ethokozisayo nenemininingwane. Isithombe se-IP sizohlanganiswa emigwaqweni yedolobha futhi abantu abasha bathande ezemidlalo, umculo, i-hip-hop neminye imisebenzi yokuzijabulisa. Izwa imidlalo emnandi yemidlalo ngenkathi ujabulela ukudla, bonisa indlela yokuphila emincane, emnandi nejabulisayo.
Lwesithathu 27 Apreli 2022
Iphakethe Lokudla Ukudla kwendabuko kwaseJapan kwesiko iTsukudani akwaziwa kahle emhlabeni. Isitsha se-soy-based stewed esihlanganisa izinhlobo ezahlukene zasolwandle nezithako zomhlaba. Iphakheji entsha ifaka amalebula ayisishiyagalolunye aklanyelwe ukwenza amaphethini wasendabuko waseJapan aveze izimfanelo zezithako. I-logo entsha yomkhiqizo yakhelwe ngethemba lokuqhubeka nalelo siko iminyaka eyikhulu ezayo.
Lwesibili 26 Apreli 2022
Uju Umklamo webhokisi lesipho loju uphefumulelwe "uhambo lwemvelo" lwaseShennongjia olunezitshalo zasendle eziningi nendawo enhle yemvelo yemvelo. Ukuvikela imvelo yendawo yendalo isihloko sendalo sokuqamba. Lo mklamo wamukela ubuciko bendabuko obukhishwa ngamaphepha ama-Chinese asemaphepheni kanye nomdwebo wobumba wokubonisa imvelo yendalo kanye nezilwane ezinhlanu ezivamile nezisengozini zokugcina ezisengozini. Kusetshenziswa utshani obuluhlaza kanye nephepha lokhuni ezintweni zokupakisha, ezimelela umqondo wemvelo nokuvikelwa kwemvelo. Ibhokisi elingaphandle lingasetshenziswa njengebhokisi lesitoko esinhle sokuphinda usebenzise.
inci I-Ceramic Lwesihlanu 24 Juni
Prisma Umtshina Weziphatho Ze-Ultrasonic Ezitholakalayo Lwesine 23 Juni
Baan Ikhabethe Isethi Yekhabethe Lwesithathu 22 Juni
Design Ingxoxo kosuku Lwesihlanu 24 Juni
Design legend losuku Lwesine 23 Juni
Umklamo wosuku Lwesithathu 22 Juni
Umqambi wosuku Lwesibili 21 Juni
Iqembu lokuklama losuku Msombuluko 20 Juni
Izakhiwo Ezixubile Zokwakha Ubunikazi Bebhizinisi Isibani Ukudla Okungenamsoco Iphakethe Lokudla Uju